Himalaya Dainik » आफैले पालेको कुकुरले रणबीर कपुरलाई अनुहारमै टोकेपछि….
आफैले पालेको कुकुरले रणबीर कपुरलाई अनुहारमै टोकेपछि….
१ श्रावण २०७७, बिहीबार
बलिउड कलाकार तथा अभिनेता रणबीर कपुर प्राय कुकुरसँगै भएको भिडियो सार्वजनिक गरिरहन्थे । उनले कुकुरलाई धेरै माया गर्थे । रणबीर कपुरको केटी साथी आलिया भट्टपनि कुकुरलाई धेरै माया गर्थिन । उनीहरुले कुकुरसँग ‘मस्ती’ गरेको समाजिक सञ्जाल मार्फत तस्वीर बाहिरीएका थिए ।
तर त्यति धेरै माया गर्ने कुकुरले नै रणबीरमाथी नै आ क्रामण गरेको छ । कुकुरको आ क्रमणबाट घा इते भएका रणबीर उपचारको लागि अस्पताल गएका छन् ।
एक रिर्पोटअनुसार अभिनेता रणबीरलाई कुकुरले अनुहारमा ह मला गरेको थियो । उनलाई लागेको चो’ट सामान्य नभई अलि अनुहारमा ग म्भिर खाल्को चो ट लागेको दैनिक जागरणमा खबर छ । अनुहारमा लागेको चो टलाई कलाकार कसैले पनि जो’खिम लिन चाहादैनन् उनी तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिन अस्पताल पुगेका छन् ।
यस अघि नै अभिनेता रणबिरले कुकुर घुमाएको भिडियो बाहिर आएको थियो । आलिया भट्टले पनि कुकरसँग मस्ती गरेको रणबीरको तस्वीर इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी थिइन् । रणबिरलाई कुकुरले आ क्रमण गरेको र उपचार भइरहेकोमा बारेमा आधिकारीक जानकारी आएको छैन् । तर रणबीरलाई कुकुरले आक्र मण गरेको मिडियाहरुले भने दावी गरीरहेका छन् ।
यी १२ खानेकुरा दुधसँग भुलेरपनि नखानुहोस्
कहिल्यै क्षमा नमिल्ने जीवनका १२ पाप
विहानै देखिएका यस्ता ५ चिजले दिनेछ राम्रो संकेत
यस्ता कुरामा कहिल्यै संका गर्नु हुदैन
यस्ता काम महिलाले राती गरे लक्ष्मीकाे बास हुन्छ
बालकले कुकुरलाई मास्क लगाइदिएको भिडियो भाइरल [भिडियोसहित]
क्युट मलिका, कुल मलिका [फोटो फिचर]
यी ५ बलिउडका स्टारका पहिलो पारिश्रमिक कती ?
आज विश्व बाघ दिवस मनाइँदै…
‘दुई हप्तामा कोभिड–१९ को उपचार सम्बन्धि राम्रो खबर पाइनेछ’: ट्रम्प
रञ्जन कोइराला फैसलामा सर्वोच्चको विज्ञप्ती: टीका टिप्पणी नगर्नू
२६ वर्षीया सन्तोशीको ट्रकले लियो ज्यान
कास्की र स्याङ्जामा भारी वर्षा मापनः मोदीखोला आसपास सजग रहन अनुरोध
पाेखराकाे सडकमा ८ बर्षिया बालिका माक्स बेच्दै, हानिन् नेतालाई झटाराे (भिडियाेसहित)
‘बुबालाई भेट्न पाएको थिइँन, अब यत्तिकै भयो’
रञ्जनका छोरा भन्छन्- ‘मेरो बुवा निर्दोष हुन्’ (भिडियो)